Re: Very finoana, reraky ny fiainana
Date: 09 septembre 2016 - 12:56
Izaho dia athée ary tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Tsy mino koa ny fisian'ny SATANA.
Efa nohazavaiko teto imbetsaka ny hevitro momba ny fivavahana fa tsy sujet iny.
Izao no torohevitro.
Fantatro fa mafy izany miara-miaina miaraka @ aretina izany ary mampiova mihitsy eny fa na dia ny fifandraisana @ manodidina aza (havana, namana, ...), misy ny mahay ary misy ny tsy mahay miaina miaraka @ izany.
Raha toa ka ao anatin'ny fivavahana no ahitanao apaisement toy ireo olona be dia be eo ambony eo ireo dia mivavaha !!!
Tahaka ny sasany, mitsilany eo ambony divan mandoa ny fanampian'ny psychologue no ahitany apaisement !!!
Na koa mihinana fanafody anti-dépresseur isan'andro no ahitany apaisement !!!
Sy ny sisa sy ny sisa !!!
Date: 22 octobre 2016 - 06:56
Mifalia mandrakariva na misy vola na tsy misy, na misy aretina na tsy misy fa défier o mitsy satana.
Tsy misy afa tsy ny devoly sy Andriamanitra no hery miasa koa mahaiza misafidy satria efa fantatrao ny tohiny.Ny ampitsonao ankino @ Tompo.Ny hampiala ny finoana efa kely ao aminao no tanjon'ny satana.
Ataovy daolo izay moyen hahafahanao mifantoka @ fivavahana kristiana fa aza manaiky rebirebena @ ahiahy hoe tsy miasa Andriamanitra izany.Ilainy ianao tsy misalasala dia entiny @ zava-mahagaga.
Jereo ilay flèche andehanan'ny fiainanao, fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny Teninao.Avilio @ finoana ny teny.Tsy roue de secours ny finoana fa volant.Any ivelan'ny fiaranao ny loza fa mivilia @ làlana marina dia Jesosy Kristy.
Mahereza mivavaka sy mamonjy fotoana fa toy izany hatry ny taloha.Aza mijery ny tenanao fa tsinontsinona isika fa ilay Lehibe ao anatintsika no maharesy ilay ratsy.Tonony ny vavanao fa Andriamanitra no mahasitrana anao.Aza manonona fisalasalana akory.
Mahereza fa làla-masaka efa nandalovan'ireny mpanompon'Andriamanitra lehibe ireny izao.Mila mianatra @ ireny mpampianatra Tenin'Andriamanitra ireny.Dia mahatoky tsara toy ny fanarahana ny fomba fihinanana fanafodin'ny dokotera ireny.
Fa tandremo fa satana ny handrobaka foana satria tsy tia sady mialona anao izy.
Tsy misy dikany io aretinao io fa tsofin'Andriamanitra rehefa antsoinao Izy hitarika ny fiainanao @ destiné anao ny Fanahy Masina raha manaraka toro-marika tsara ianao.
Mandehana manolo-tena mivavaka, mitokana indraindray satria samy manana izay tiany hambara @ tsirairay ny Tompo, dia hahazo révélation manokana mihitsy ianao.
Ireo expériences ireo dia efa samy nataoko ary efa nozaraiko ny hafa ka nahasoa azy koa.Nijoro vavolombelona matetika aho , zany hoe nandalovana olana maro fa nibata fandresena foana e ! Tsara Jesosy !
Manonona sahady finoana sy fanantenana ary fitiavana hita taratra eo @ fiainanao aho.Rehefa henonao fa manaikitra ilay aretina dia tonony ny fahasitranana, izay ilay auto délivrance.
Hatreo aloha fa mino aho fa ny tohiny ho hitanao fa efa misy fiainana nomanin'Andriamanitra ho anao ambadik'izao raha mazoto ianao.Raha tia Azy ianao @ aretina eo aminao dia ho tia Azy ianao @ fitahiana tsy hay hazavaina.
Mandehana manompo Azy àry fa somary nalahelo Andriamanitra ianao tsy nandeha nivavaka intsony.
Tahian'ny Tompo ho fantsona hidiram-pitahina sy fahasoavana e
Par: Shhhhhhhhhh !
Date: 22 octobre 2016 - 08:44
Date: 11 janvier 2016 - 15:59
fanina >>> mba jereo kely ilay lien nalefako etsy aloha sao mba mety hanampy anao.Raha mety moa tsara raha tsy mety dia hajanony.
Tsisy dikany !
Niandry ihany aho kelikely izay mba ho avoakany, ..... tsisy !
niandry......... eeeee !
ireny ilay vidéos anisan'ny mandrebireby !
Par: TENA MAHASITRANA TOKOA VE ?
Date: 22 octobre 2016 - 16:13
-ny mi-défier ny satana ?
-ny miankina @ Tompo ?
-ny mifantoka @ fivavahana kristiana sy ny tsy manaiky rebirebena @ ahiahy hoe tsy miasa Andriamanitra izany?
-ny fiheverana fa ...tsy roue de secours ny finoana fa volant.Any ivelan'ny fiaranao ny loza fa mivilia @ làlana marina dia Jesosy Kristy.
-ny mivavaka sy mamonjy fotoana fa toy izany hatry ny taloha
-ny mijery ...fa tsinontsinona isika fa ilay Lehibe ao anatintsika no maharesy ilay ratsy.
-ny manonona @ny vava fa Andriamanitra no mahasitrana?..........
Sitrana daholo ve ireo manan aretina ka manao an'izany ?
Nahoana no tsy ampiarina any amin'ny hôpitaly izany fomba fanao izany mba ahasitrana izay rehetra marary any ?
Ary ireo izay tsy manaradia ny finoana kristiana (Jiosy , silamo , hindouista , boudista , mpanaradia ny finoan-dRazana , TSY MPINO NY FISIAN4ANDRIAMANITRA ...), mba misy sitrana ihany ve izy ireny kanefa tsy manaraka akory ireo volaza eo ambony ireo ?
Date: 23 octobre 2016 - 00:26
fanina> Tsy namaky izay voalaza rehetra etsy ambony ao ary tsy manam-potoana koa fa amiko ny hevitra samy manana ny azy araka ny fiainana niainany.
Izao anefa raha namaky ny zavatra lazainao izao dia tsotra nolazaiko anao hoe Misaora an'Andriamanitra ary miverena any aminy fa mbola misy miaina mafy noho io iainanao io any ho any fa ianao no tsy mahalala izany (Andriamanitra aza nanome Asa ho anao, vady ho anao, zanaka ho anao,...) dia mbola tsy tsapanao hoe famindrampon'Andriamanitra ve izany.
Ny azoko ambara dia UNCONDITIONNELLE ny fitiavan'Andriamanitra tiany foana ianao na manao ahoana na manao ahoana tsy nanary anao izany izy fa ianao mila misaotra Azy @ny zavatra rehetra.
Ekeko fa manana aretina ianao fa ho tanisaiko anao angamba ny probleme ko dia hoy ianao hoe anisany mizaka mafy ity rahavavy ity saingy ho ahy deraiko lalandava ny Tompo ary tsy miverin-dalana mandrakizay izany izao fa na mafy toy inona aza vao maika mahamafy orina ny fifandraisako an'Andriamanitra izany.
Tsaroako nisy mpanompon'Andriamanitra matanjaka be izay indray andro tena vaky vava mihitsy hoe ianao hoy izy no anisany mizaka ady mafy indrindra eto antany satria entinao daolo ny ady mafy rehetra izay iainany olona. Mety tsy hino ianao raha ilazako an'izany fa nefa zavamisy izany.
Ny azoko ambara dia tsotra tsy Andriamanitra mihitsy no hametraka zavatra ratsy eo @ny fiainanao fa betsaka ny akason'olona izay mahatonga ny fiainany olona iray hivary lafo (fahantrana, aretina, tsy manana, misarabady,...) Ireo rehetra ireo dia asany devoly avokoa. Ekeko fa tena tsara ny vavaka saingy tsy ampy raha tsy manana mpanompon'Andriamanitra ianao izay miaro anao @ny alalany asany maizina. Averiko mpanompon'Andriamanitra fa tsy mpanompo sampy akory. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra manana don spirituel afaka manasitrana @ny alalany vavaka dia ireny handehanana. Misy antony ao matoa ianao marary ela be toy izany.
Mahereza dia miorena tsara fa tsy izao fiainana izao akory noho inona fa mijere lavitra ny @ny ho avy.
Par: dia mba andriamanitra hafahafa koa...
Date: 23 octobre 2016 - 18:26
...ny anareo tony an!
misy olona sady nomeny ASA , VADY ,ZANAKA ...
kanefa dia misy ireo sady :
TSY AN'ASA , NO TSY MANANMBADY , NO TSY MISY ZANAKA , ary ny sasany aza moa dia maty anaty tatatra na anaty lava-piringa (vaovao nivoaka taminin'iny herinandro lasa iny tamin'ny gazety) ary aman'etsiny ny tahak'izany eto amin'ity Nosy Madagasikara Malalatsika ity !
Date: 24 octobre 2016 - 06:48
Aza manely tsaho e. Aman'hetsiny ve ny matimaty ho azy tsy efa lasa firenena nandroso isika? Izany hoe tokony ho 2 na 3 tapitrisa sisa no isany malagasy? Ary sur aho fa izay ihany ko sisa no zakan'ity firenentsika ity e. Be loatra ny mponina raha oharina amin'ny vokatra
Date: 24 octobre 2016 - 12:14
Fanina >>> Miala tsiny fa izao vao mba mitsidika ity rubrique ity ka mahita fa misy "tsy rariny kosa" raha toa ka misy manan'olana tsy mba manana anjara fampaherezana aty ambadika aty.
Ilay lohahevitrao efa folo volana lasa no napetraka, na izany aza dia tonga hitondra ny soso-kevitra ihany izahay satria izay ilay finoana resahanao (raha tsy nino izahay fa mbola hiverina hamaky ny post nalefanao ianao dia tsy nanoratra teto akory)
Anananao avokoa ny fototra iorenan'ny finoana kristianina saingy norantsanana ilay izy, hany ka tsy nisy vokatra loatra fa ny vataben'ilay hazo no hany sisa tavela.
Miara-miasa avokoa nefa na ny laingon-kazo na ny raviny amin'ny fitondràna ireo tsiro hanome ny voa.
Tadidio ny Tenin'ny mpamonjy fa ny voa (Izy tenany. ilay Tenin'ny Mpahary) dia tsy maintsy maty aloha vao mitsimoka. ity fitsimohana resahantsika ity dia ny hoe hitondra vokatra ho an'ny fiainana fa tsy ho maty momoka.
Ahoana ary no hahatratraranao io tanjona lazaiNY io fa tsy maintsy maty aloha Izy (tsy ilay tantara fandrentsika fa tena hoe réalité satria tsy mythe ny Kristianisme fa "Ankehitriny sy Taloha ary ny Ho avy ) .
Efa maty tao aminao (ilay Tany novolavolain'ny tànaNY) ve Izy...
Tsarovy fa mialoha ny fahafatesany (fepetra hahafaty Azy) nefa dia tsy maitsy ritra ny raNY, moa ary ve efa nandatsaka io raNY io ianao mba haharitra azy sa mbola mijanona ho ilay tantara lazain'ny Fiangonana maro ihany koa no raisinao ho an'ny tenanao.
Rehefa voavalinao avokoa ireo fanontaniana vitsivitsy ireo dia ho azonao ny antony mbola maha-tafatoetra ilay aretina ao aminao, araka ilay voasoratra hoe: " Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika; "Isaia 53:4
Rehefa mbola tsy tao aminao no niseho ilay fahafatesaNY dia mbola tsy nisy na inona na inona nentiNY avy ao aminao 'zay.
Mahereza mitady ary fa izay tena nifanena tamin'ny mpamonjy tsy mamotsotra Azy mora foana izany.
Date: 24 octobre 2016 - 18:24
"Aza manely tsaho e. Aman'hetsiny ve ny matimaty ho azy tsy efa lasa firenena nandroso isika? "
metimety kokoa angamba ry $ongomby ny mianatra mamehy izay voasoratry ny olona vao miteniteny foana
aman'etsiny tokoa ry $ongomby no ..."TSY AN'ASA , NO TSY MANANMBADY , NO TSY MISY ZANAKA" , ...eto Madagasikara efa ho taona maro nifanesy izao ...ary " ny sasany aza moa dia maty aty tatatra na anaty lava-piringa (vaovao nivoaka taminin'iny herinandro lasa iny tamin'ny gazety)
sarotsarotra ihany angamba ny hifanakalozan-kevitra raha toa ka mbola mila fampianarana mamaky teny ny dingana tsy maintsy andalovana
marina kosa kanefa ny fanmbaranao hoe be loatra tokoa ny mponina raha oharina amin'ny vokatra misy kanefa tsy milaza izany sanatria hoe 2 3 tapitrisa no zakan'ity firenena ity fa mitaky kosa fomba fitondrana sy rafi-piaraha-monina ary ...asa sy famokaran-karena mifanandrify amin'ny habetsahan'ny olona misy amin'izao fotoana izao ( 22 tapitrisa hon )
Date: 24 octobre 2016 - 19:04
Tato ho ato dia lasa mpiavavaka be daholo ny gasy , tena lasa professionnel mihitsy ary tsy misy hevitra fa mahay ny pitsopitsony rehetra, mipopoka ny toko sy andininy isaky ny mihetsika, vokany , mijaly sy mahantra fadiranovana ny gasy satria tsy any no olana...
Date: 25 octobre 2016 - 08:31
opium du peuple hoy ingahy Karl Marx
Sady tsy mahavidy antidepresseur no tsy afaka manantona psy, inona ary no hatao eo hoy ianao?
Date: 25 octobre 2016 - 16:09
Ka tsy tsara aza ve hoe lasa mpivavaka be daholo ny malagasy saingy arakaraky ny mampitombo ny mpivavaka ihany koa no mampitombo ny ratsy satria voasoratra ao anaty boky firaketana fa vitsy no hovonjena... andeha hataontsika hoe ny ampahatelon'ny mpivavaka ao anaty fiangonana iray ihany no ho voavonjy (satria izy ireo no marina), ny 2/3 zany mba tsy hitenenana hoe very dia manao ny tsy marina fa miafina any ambadiky ny fivavahana fotsiny ihany.
Afaka manao ny kajy tsotsotra isika fa mbola betsaka ihany zany ny mpanao ratsy (izay olona avy ao anatin'ireo fiangonana lazaina fa betsaka ireo),manampy azy ny efa fitaovan'i satana rahateo : Tsy gaga isika raha mbola toy izao no manjo ny firenentsika.
Ny faniriana dia mba ny malagasy rehetra no tena mpivavaka "marina" ka izao tontolo izao no repère haha-vitsy an'isa antsika. Mety ho efa lanitra ny tany @'zay fotoana izay.
Nofy ihany iny kanefa aleo hijanona ho nofiko fa ny ahy indraindray ny nofiko tanteraka.
Par: tsy mahagaga tokoa ...
Date: 26 octobre 2016 - 22:59
...raha mbola toy izao no manjo ny firenentsika...satria novendranin'ny finoana ny gasy ny ankabeazan'ny Malagasy
Date: 27 octobre 2016 - 11:04
Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamaitra.Rehefa ho tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra i Jesoa Kristy arahin'ireo anjely maro sesehena,manantena aho fa ianao no anisan'ny ho Sambatra indrindra ry Fanina.Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao.
Aza mifantoka be loatra any amin'ny aretinao ny fijerinao.Banjina hoe inona avy no zavatra tsara nomen'Andriamanitra anao.Mandray taratasy dia ataovy lisitra,ampitahao fa betsaka ary tena betsaka ny tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao.
1670km/h ny hafangainam-pandehan'izao tany hitsahintsika izao(raha mandeha fiara isika eo hoe amin'ny 100km/h no zakantsika.Miodina mafy dia mafy ny tany fa ny herin'Andriamanitra no mitazona azy tsy mahalany ritra antsika.Sombitsombiny fotsiny amin'ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra izany fa mbola maro ireo zavatra mahavariana amin'nity tany honenantsika ity.
Mazotoa,mahereza fa mbola hoavy ilay maraina hitondra fahasambarana.MANANTENA IZANY NY TENAKO,MIANDRANDRA IZANY ka tiako hozaraina aminao koa izany fomba fijeriko izany.
Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo
Date: 27 octobre 2016 - 15:03
NOJEREKO IO FA TSARA BE
Par: hafatra ho an'ireo...
Date: 27 octobre 2016 - 17:52
...4mi na koa ireo zaza any atsimon'ny Madagasikara matin'ny kere
ity no hafatra ho anareo :
"Banjina hoe inona avy no zavatra tsara nomen'Andriamanitra anareo.
Mandray taratasy dia ataovy lisitra,ampitahao fa betsaka ary tena betsaka ny tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo."
Tsara tokpa ny Andriamanitry by kristiana ary tsy mba ...manavakavaka na hatrany amboalohany izany na hatramin'izao 2016 izao
Par: TENA SAHINAO VE
Date: 27 octobre 2016 - 18:32
hafatra ho an'ireo... >> tena sahinao ve ny hanome hafatra toy izao ho an'ireo kere any atsimo ?
Tena fandatsana zao fa tsy hafatra tsotra.
Na ny manoratra aza ve ho hainy, ary ny hohaniny aza tsy misy ka aiza no hahitany taratasy sy crayon hanaovana listra lavabe izany ?
Na tsy hitan izy ireo aza ny zavatra soratana ato mba mihevera ihany fa ssss
Date: 27 octobre 2016 - 20:20
...izay tsy nahatsikaritra fa i "vavaka" eo ambony no nanasa an'ilay manana aretina mba
-"...hibanjina hoe inona avy no zavatra tsara nomen'Andriamanitra azy.
-handray taratasy hanaovany ny lisitra... ny tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany."
koa raha tsy dia takatrao loatra ny dikan'ny fanitarana an'izany fanambarana izany raha ampiarina amin'ireo olon-kafa manana olana goavana koa eo amin'ny fiainana dia mila mametra-panontaniana amin'ny tenanao ianao !
azonao ianao valiana koa ange hoe :
-inona avy ireo zavatra tsara nomen'io Andriamanitr'io ny 4'mi sy ny zaza ianjadian'ny kere e?
-azonao atao koa ny manao ny listra mahakasika an'izany tsara misongadina nataon'Andriamanitra tompoinao sy hivavahanao ho an'ireny zaza aman'arivony ( mety aman'etsiny mihitsy aza angamba) misy eto Madagasikara sy eran'ny tany mahantra ireny
koa raha heverinao fa misy fandatsana ireny hafatra voalaza fa ataon'Andriamanitrareo ire ny dia Izy anontaniana !
Date: 28 octobre 2016 - 11:51
fanina<<<< anefa anatin'ny tahotra sao mifindra amin'ireto zanako ny aretioko....
Mikasika an'io "Tahotra" io no mba tiako hijoroana vavolomelona eto ary hankaherezana anao.
Ny vadiko de manana kilema hatrany ambohoka, tsy izy irery ihany fa misy mpiray tampo aminy, misy havany akaiky hafa. Natao opération izany ary tsy hita be intsony.
Vao hiaraka, izahay dia noho io resaka "Tahotra" io dia nisy ny efa nanakivy , avy @ fianakaviany mihitsy (tsy hidirako lalina) hoe izy (ny vadiko) ange tsy hiteraka fa "matahotra" sao dia manaraka, le izy, ary efa hita tokoa fa resaka hérédité ilay izy. Ny tenako manokana dia tsy niraharaha an'izany mihitsy, tsy aiko hoe ahoana fa tsy niinfluencé ahy t@ izay fiarahanay mihitsy izany.
Nivady izahay , ary raha mbola misy ihany ireo izay mbola nihevitra fa tsy tokony hiteraka. Niteraka izahay, ary tsy mbola nisy fotoana, na iray minitra monja aza natahorako sao hisy kilema ilay zaza, masaka antsaiko sy ampoko na tsy heritreretiko be aza fa Andriamanitra Tsara, Izy no mpahary, ary ataony tsara ny zanakay, mbola tsy hoe naterka insdray izaho tamin'izany fa tena nino ny fitiavan'Andriamanitra. Normal be ny zanakay na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy, "amimpanetretena no hilazako ny hoe iri'ny olona fa tsy maniry olona" . Mbola niteraka roa hafa izahay, fa tsy nisy ani'zany tahotra izany mihitsy tamiko, ny vadiko aza no hitako mola nisy kely dia kely, fa raha izaho dia fantatro fa efa lasa ny zavtra taloha, fa efa fiainana hafa mihitsy ny anay , toa an'ny zokiny ihany ireo zandriny, rehefa miheritreritra izany aho dia tsy misy atao hafatsy ny midera sy mankalaza hatrany an'Andriamanitra Fitiavana, izay nanolotra ny Zanany tokoa ho famonjena, izay efa nitondra ny hozona rehetra, ny ratsy rehetra. Mahagaga Andriamanitra, angataho izy mba ho levona ny tahotrao. Tsy resak fiangonana izany fa fiainana manokana miaraka Aminy.
Par: vintana ? lahatra ? vokatry ny ota ?...
Date: 28 octobre 2016 - 14:31
...niharan'ny fahatezeran'i YHWH ?
Izany tokoa ve no mety nihavian'ny fahasembanana , ny kilema isan-karazany ...?
mety antony ara-biolojika , genetika , fahasimban'ny tontolo nanodidina akaiky an'ilay zaza tany an-kibon-dreniny ( Tchernobyl , vovoka simika ,fifoan-tsigara , fisotroan-toaka ...) ?
mitondra fandrosoana ve ny vokatra entin'ny fikarohana siantifika sy medikaly eo amin'ny fanatsarana fampihenana na koa ny mety hisorohana an'ireny aretina ireny ?
Date: 30 octobre 2016 - 22:53
Tsy haiko ianao raha mbola miverina eto...fa napetrako nankiniko tamin Andriamanitra fony izaho nandalo nivahiny tany betlehema omaly sabotsy ny soratrao milaza ny olanao.
Matokia fa aza mora kivy
Par: aiza ô
Date: 31 octobre 2016 - 17:18
Matetika rehafa mihaino olona mitory teny dia maheno fa tsara foana no ataon'Andriamanitra
.. nefa anie ka Izy koa no tompon'ny loza
-> izao loza izao avy amin'i Jehovah
-> Jehovah no nahatonga ny loza ao an-tanàna
-> Ny ratsy koa dia horaisintsika avy Aminy
2) Na izany aza dia Iafonanany koa ny olona sasany
-> Misy mitady Azy fa Hitsohahany
3) Misy zavatra koa nefa tsy Fantany sy tsy Hitany
-> Amin'i Adama izany dia azo iafonana Andriamanitra
-> Nidinanan'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy hijery ilay tilikambo???
4) Misy zavatra tsy Hainy koa
-> satria nanana kalesy vy ireny
Rehefa oviana izany Andriamanitra no mamonjy dia rehefa oviana Izy no tsy mamonjy
Par: tsy mahagaga akory satria ...
Date: 31 octobre 2016 - 19:32
....olombelona tahakan'izaho sy ianao ihany ange no nanoratra an'ireny rehetra ireny e!
Date: 03 décembre 2016 - 01:22
Andriamanitra dia manana ny hevitra hieveran'ny anao ary hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza . Izy manana ny fotonany ,manana ,ny kajiny fa ny olana ho antsika ny kajintsika no tiatsika ho kajin'Andriamanitra azon'ny mathematicien hazavaina ve oe 5+2=5000 il reste 12 io le mofo 5 sy hazandrano 2 nahavoky olona 5000 fa mbola nisy ambiny 12 sobika ny finona ao aman'Andriamanitra mila faharetana fa Izy tsy mitaiza antsika ho amin'ny fahagagaga ary raha fanasitranana ftsn no tena hitadiavananao azy mety tsy hohitanao "Anaka atolory Ahy ny fonao "io aloha no tena angatahan'Andriamanitra aminao matetika isika vao mangataka dia efa misy fanahina matetika ao anatintsika .Ny olona rehetra samy manana ny zavatra ampandaloviny azy tsirairay fa Izy tsy manome zavatra tsy zakanao izany.Nanontaniny mpianan'i Jesoa momba ity jamba iray ny rad ve no nanota no nahatonga azy jamba tsia no valiny isika mandrakariva manamelon tena Andriamanitra tsy mpanameloka olona fa hafetsena santana io miampanga io fa isika efa nohamarinina tamin'i Jesoa Kristy tsy afaka maneho ny heriny izy raha tsy misy ady atrehananao eo ahoana no ahafantarana fa mahery izy raha tsy miady fa finona no takin'ny Tompo aminao raha tena mino isika ho hitantsika ny vonihitr'Andriamanitra mahereza mivavavaka fa tsy ho vitanao ny fiainana tsy misy vavaka aza miady amin'ilay Mpanao anao
Par: Mamikelin'i JESOA
Date: 09 mai 2017 - 09:25
BE dia be ny resaka azo atao hampahery anao. saingy aleo I JESOA KRISTY Tompon'ny finoana sy mpanefa izany no hiteny sy hamphery anao anio.Fa hoy ny Tompo aminao hoe « Ary rehefa ren'i Jesosy izany, dia hoy Izy: Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny Zanak'Andriamanitra. » (Jaona 11:4)
Noho izany miverena Aminy ianao dia ampiasao io finoana mbola hananao io.
Fa rehefa tafaverina ao Aminy ianao de ho fantaro tsaara ny hevitra heverana anao.Fa ny faharetana no tsy hananao.
Aza adino fa tsy mivavaka isika mba ho sitrana sy hahazo vady sy vola sy fiainana tsaratsara. fa mivavaka isika mba ahazo FAMONJENA. Fa rehefa azonao ny Famonjena dia manaraka ho azy zany rehetra izany. I JESOA no efa niteny izany ao @ Matio 6/33.
Rehefa mivavaka isika dia mila mihaino sy mandray ny Teniny @ finoana koa e!
Aza atao sens unique fa Izy koa anie manana resaka sy fiangaviana atao aminao e
Farany efa niteny IZY fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Lazarosy aza anie maty efatra andro natsangany e!
Fa mila mihaino Azy isika. Satria efa niteny izy fa tsy ninoan'dry Marta sy Maria fa ny fanasitrana eo no ho eo no nandrasany sy nadrandrainy fa tsy ilay asan'Andriamanitra haneho ny voninahiny eo anatrehan'ny zava-mitranga. Ilain koa
io aretinao io Mba ahatonga anao ho volamena voasedra ka maharitra ny mafy indrindra.
Date: 27 juin 2017 - 11:51
ny anarako dia tina,anatiny fahakivina tanteraka zaho izao zaho dia mbola mpianatra,efa mananjaka,mahatsiaro tena mijaly saina ary tsy hitako mihitsy ny ahafahako miala amin izy io,manana eritretra mandalo am sainako fona isanandro ny hamono tena,nefa malahelo ny fianakaviako za!ohatrany ny hoe efa nahavita fiainana zany ka tonga am farany,ampio aho re olona fa mijaly